Iindaba eNigeria nangaphaya: UTonto Dikeh othunyelwe ngu-Ex-umyeni + Ngakumbi
I-Rave News Digest: UTonto Dikeh Ogcinwe yi-Ex-umyeni, u-Agba Jalingo okhutshwe, uPep Guardiola + Ngakumbi
TUDikeh ubanjiwe ngumyeni wakhe wokuqala, u-Churchill, u-Agba Jalingo ukhululwe, uPep Guardiola akashiyi eMan City. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. UTonto Dikeh ex-umyeni ka-Churchill u-Olakunle uyamangalela
Amaxwebhu enkundla yamatyala
UTonto Dikeh Utyholwe ngumyeni wakhe wangaphambili, Icawa ka-Olakunle ye-₦ 500M malunga neenkcazo ezigwenxa ezenziwe nxamnye naye kwividiyo yakhe edumileyo ye-YouTube ngo-2019.
U-Churchill Olakunle uye wamangalela uTonto Dikeh kwiividiyo azikhuphe ngo-2019 ngejelo lakhe le-YouTube apho wambiza khona. Kwividiyo, utyhola umnini-shishini ngokuba ngumqhetseba kwi-intanethi kunye nesiko.
I-Olakunle Churchill kunye noTonto Dikeh
Kwisaziso somthetho esimenze ukuba abe ngummangali wokuqala kunye neBig Church Foundation njengommangali wesibini, uChurchill wathi ezi zityholo azinasihlahla kwaye zixhaswe ukonakalisa umfanekiso wakhe kunye namabhongo ezopolitiko.
Ngokuka-Churchill, uTonto Dikeh wayesazi ngesigqibo sakhe sezopolitiko kwaye wagqiba kwelokuba abonakalise ngevidiyo ye-YouTube. Uye ke waqhubekeka esithi umlingisi kufuneka ahlawule imali eyi-₦ 500M ngomonakalo ngokubanzi ongene kuwo malunga nokupapashwa okungalunganga nobuxoki.
2. UAgba Jalingo ukhululwe eluvalelweni
UAgba Jalingo uyagcwala
Umbhali UAgba Jalingo Ukhululwe eluvalelweni emva kokuhlangabezana nemeko yakhe yebheyile. Itshantliziyo, Inibehe Effiong, uqinisekisile ukukhutshwa kwakhe kwimithombo yeendaba ngoMvulo. UJalingo, ongumshicileli weCross River Watch, wabanjwa okokuqala ngamapolisa ngo-Agasti ka-2019 ngomyalelo ka-Ben Ayade okhokelwa nguRhulumente wase-Cross River State.
Emva koko wanyanzelwa ukuba avukele urhulumente ngelokuzama ukubhukuqa urhulumente welinye ilizwe ngenxa yamanqaku abuhlungu awawapapashayo. Ngenxa yokuvalelwa kwakhe ixesha elide, iAmnesty International yabhengeza ukuba eli gorha, "ibanjwa lesazela".
Kwiveki ephelileyo, bekukho uthotho loqhanqalazo olwenziwe eCross River malunga nokubanjwa kwakhe. Inkundla, eyayikhe yalalela isicelo sakhe sebheyile, emva koko yamnika ibheyile kwiveki ephelileyo.
3. Iqela labulawa kuhlaselo lokuzibulala kwindibano yenkolo ePakistan
Amagosa ezokhuseleko ePakistan ahlola imeko yokuqhushumba kwebhombu eQuetta
Uhlaselo lwebhombu yokuzibulala kufutshane nendibano yezenkolo kwidolophu yasePakistan eQuetta lubulale abantu abasixhenxe kwalimala abanye abangama-25, ngokwamagosa.
Zia Langove, Umphathiswa wezasekhaya kwiphondo lase-Balochistan ekumazantsi-ntshona, uthe ukuqhuma ngoMvulo kwenzeke ecaleni komsitho obuhlelwe ngu-Ahle Sunnat Wal Jammat (ASWJ), iqela lezopolitiko elalinxulunyaniswa neqela elixhobileyo.
"Umhlaseli weza ngesithuthuthu, wamiswa ngamapolisa [kufutshane nerally],U-Langove uxelele i-media. "Emva koko, kuqhushumbe. ”
Akukho qela liye labanga uxanduva.
4. Igosa laseTanzania lisoyikisa ngokubamba abantu 'behlazisa urhulumente'
Igosa laseburhulumenteni laseTanzania liyalele ukubanjwa kwabantu abathe babelana ngevidiyo zakwimeko embi yeendlela epakini, bezityhola ngotywala kwezoqoqosho. UMkomishinara weNgingqi we-Arusha Mrisho Gambo bathi abo basasaza iividiyo bafuna ukulihlazisa ilizwe.
Uyalele umphathi wamapolisa wenqila ukuba babambe baphinde babuze imibuzo abo bathumele le vidiyo "ukufumanisa injongo yabo".
Umnumzana Gambo uthe oorhulumente bajongana nemiceli mngeni ekufuneka iziswe kumagosa kwaye kungabiwa nayo kwi-Intanethi.
5. U-Pep Guardiola uxelela abahlobo bakhe ukuba unomdla wokuhlala eManchester City FC ngaphandle kwe-Champions League
U-Pep Guardiola ebengumphathi kwiManchester City ukusukela ngo-2016
Pep Guardiola uxelele abahlobo bakhe ukuba unomdla wokuhlala eManchester City ngaphandle kokuvalwa kweminyaka emibini kwiqela leChannel League. Ngaphandle kokuba iSixeko sibhukuqa isibhengezo esimiselwe yi-UEFA ngoLwesihlanu, ngekhe bakhuphisane kwibhola ekhatywayo yaseYurophu de kube ngo-2022 emva kweli xesha.
Isivumelwano se-Guardiola kungenxa yokuphelelwa yisikhathi ngo-2021. Kulindeleke ukuba athethe ngalo mbandela okokuqala ngolwesithathu.
Isivumelwano sakhe sinecala lokuphumla ekupheleni kwale sizini kwaye bekucingelwa ukuba uza kuyenza into yokuba iSixeko singaphumeleli kwisibheno sabo abazakusifaka kwiNkundla yeArbitration yezeMidlalo kwiintsuku ezimbalwa ezizayo.
Nangona kunjalo, kuyaqondakala ukuba lo mntu uneminyaka engama-49 ubudala uthe akazukuyenza loo nto kwaye uhleli ezibophelele kwiklabhu.
Uhlobo Rave Februwari 17, 2020
Umdlalo weDrama Gentry, Mnumzana Eazi x JTO + uSuku oluBomvu lweSuku lweValentine